Sida loo shaqsiyeeyo WordPress si loo kordhiyo Beddelka | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida loo shaqsiyeeyo WordPress si loo kordhiyo Beddelka
Sida loo shaqsiyeeyo WordPress si loo kordhiyo Beddelka
Daraasaduhu waxay muujinayaan in in ka badan 68% dukaameeysatada ay bilaabaan raadinta alaabada internetka. Marka ay ku qoraan magaca meheraddaada ama badeecada ay ka raadinayaan Google oo ay soo galiyaan mareegahaaga waxa aad muhiim u ah inaad siiso macluumaadka khuseeya ee ay raadinayaan.
Waxay ku qaadanaysaa isticmaalayaasha wax ka yar ilbiriqsi inay go'aan ka gaadhaan mareegahaaga taasoo go'aaminaysa inay joogaan ama baxayaan.
Haddii macaamiishaada suurtagalka ah ay u helayaan jidkooda mareegahaaga kaliya si ay uga soo kabtaan xitaa hal ilbiriqsi ka dib, waxaad luminaysaa iibka aan dhammaadka lahayn.
Hal dariiqo oo wanaagsan oo lagula dagaallamo heerkan soo kabashada degdegga ah waa in la siiyo macaamiishaada suurtagalka ah macluumaad khuseeya, shakhsi iyo macluumaad.
Xaqiiqda Ka Danbaysa Shakhsiyaynta
Shakhsiyeynta boggaaga WordPress kaliya ma dhimi doonto heerkaaga soo kabashada, laakiin waxay ugu dambeyntii kordhin doontaa beddelaaddaada.
Iyada oo kumanaan ikhtiyaar ah oo laga dooran karo iyo kumanaan shirkadood oo lacag ku qarash gareynaya suuq-geynta dhijitaalka ah, shabakad guud, oo aan shaqaynayn ma keeni doonto beddelaad iyo iib.
Marka macaamiishu ay helaan macluumaadka saxda ah ee ay raadinayaan waxay u badan tahay inay joogaan, dhexgalaan oo ugu dambeyntii iibsadaan.
Daraasaduhu waxay muujinayaan in macaamiishu ay aad ugu dhowdahay inay wax ka iibsadaan shirkad bixisa khibrad shakhsi ahaaneed iyo in macluumaadka shakhsi ahaaneed ay kordhin karaan waxtarka kharashka suuq-geynta 10 ilaa 30 boqolkiiba.
Nambarada noocaan ah ma awoodid inaadan shakhsiyeeyo degelkaaga.
Nuxurka ay tahay inaad shaqsiyayso
Waxaad waqti badan ku bixisaa dhisidda iyo hagaajinta degelkaaga WordPress, markaa waxay noqon kartaa wax culus markaad isku daydo inaad go'aansato qaybaha nuxurka ee shakhsi ahaaneed.
Muuqaal - Sawirada ku jira mareegahaaga waa kuwo aad u awood badan waxayna si weyn u saameyn karaan heerarka beddelkaada. Haddii sawirkaagu uu ku daro shay bini'aadmi ah sumaddaada, tusiyo tafaasiisha ama hagato macaamilka meesha aad rabto inay eegaan, shakhsiyaynta qaybtan boggaaga waxay u oggolaanaysaa booqdayaashaada inay la xiriiraan shirkaddaada heer qoto dheer.
Macluumaadka xiriirka - Iyadoo sawiradu ay kuu oggolaanayso inaad la samayso xidhiidhada shucuureed ee booqdayaashaada, bixinta macluumaadka xidhiidhka saxda ah waa hab toos ah oo lagu shakhsiyeeyo boggaaga. Haddii aad leedahay wakiilo iib oo gaar ah oo meelo kala duwan ah ama khadka caawinta wakhtiga habeenka ee gaarka ah, isla markiiba tusista macluumaadka saxda ah ee booqdayaasha mareegahaaga waxay u oggolaanaysaa inay kula soo xiriiraan oo ay si sahlan wax u iibsadaan.
Su'aalaha Macaamiisha iyo Tijaabada - macaamiishu waxay akhriyaan dib u eegista internetka ka hor intaadan wax iibsan. Sababtaas awgeed, aad ayey muhiim u tahay in dib u eegis lagu sameeyo mareegahaaga. Shakhsiyaynta dib u eegistan waxay ka dhigi kartaa kuwo saamayn badan leh. Si tan loo sameeyo waxaad tusi kartaa dib u eegista alaabada khuseysa qof horay u soo iibsaday ama waxaad tusi kartaa faallooyinka qof jooga meel dalka ka mid ah una muuji qof kale oo ka soo jeeda aaggaas.
macluumaad Product - Haddii aad ka iibiso badeecad ama adeeg aan laga heli karin meelo gaar ah ama kooxo da' gaar ah, shakhsiyaynta sharraxaadda alaabta waxay noqon kartaa habka ugu fiican ee aad uga hor imaan karto macluumaadkan. Farsamadan waxay kuu ogolaaneysaa inaad siiso macluumaadka laxiriira macaamiisha ku habboon adiga oo aan ku ciriirin bogga shabakadda dadka aan u baahnayn macluumaadkan.
Wicitaanada Waxqabadka - Iyada oo ku xidhan aaladda booqdaha mareegaha isticmaalaya, halka ay ku yaalaan iyo waxa ay xiisaynayaan, hal wicitaan oo badhanka ficilku maaha mid had iyo jeer khuseeya ama soo jiidasho leh. Shakhsiyaynta wicitaanka qoraalka ficilka iyo isku xidhka ay u dirto macmiilkaaga, waxay ka dhigi kartaa mid ka waxtar badan hal-cabbir-ku habboon-dhammaan doorashada.
Boostada Blog ee la soo bandhigay iyo Waxyaabo kale - Dunidan waalida ah ee WordPress SEO, blogyada aad qorto iyo waxa ku jira ee aad ku abuurto mareegahaaga waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo khuseeya oo soo jiidanaya isticmaalayaasha. Muujinta macluumaadka booqdayaasha mareegaha iyo qoraallada blog-ka ee xiisaha leh oo khuseeya iyaga kaliya maaha inay bixiyaan qiimaha booqdayaashaada, laakiin waxay kordhisaa heerarka ka-qaybgalka ee qoraalladaada blog-ka. Si aad ula qabsato mareegahaaga, ka qaybgalka daawadayaasha xiisaynaya waxa aad wax ka qorayso waxay noqon kartaa mid aad muhiim u ah - iyo ka faa'iidaysi badan oo wakhtigaaga ah.
Siyaabaha aad Shaqsi uga dhigi karto Boggaga
Iyadoo ku xiran badeecadaada ama adeeggaaga, waxaa jira siyaabo badan oo aad u shaqsiyeysan karto boggaaga WordPress si aad u kordhiso beddelka. Waa kuwan fikrado aad ku heli karto hal-abuurnimadaada oo socota markaad shakhsiyayso boggaaga:
Shakhsiyaynta macluumaadka ku salaysan goobta booqdaha waa hal dariiqo oo wanaagsan oo lagu gaaryeelan karo mareegahaaga. Waxaad bedeli kartaa sawirka si aad uga tarjumto sawirada laxiriira booqdaha, baddali kartaa lambarada taleefanka iyo macluumaadka iibka si aad u muujiso macluumaadka xiriirka saxda ah ee ku saleysan halka ay wax ka soo iibsanayaan iyo wax ka badan. Hal-cabbir kuma wada habboona marka ay timaado boggaaga iyo macluumaadka booqdayaasha goobtaada ee meelo kala duwan ay raadinayaan.
Sawirkan waxaad ka arki kartaa sida Jaamacadda Montana ay u isticmaali karto geotargeting si ay u shaqsiyeeyaan shabakadooda iyadoo lagu salaynayo meesha ardayga xiisaynaya uu booqanayo boggooda. Halkii fariinta guud "Baro wax badan oo ku saabsan sababta UM kuugu habboon tahay," booqdayaasha Boston waxay arki doonaan fariinta "Montana waxay soo booqataa Boston" waxayna heli doonaan fursad ay ku ballansadaan wakhti ay kula kulmaan wakiilka kambaska ee ay khusayso marka ay joogaan aagga. Qiimaha gujinta macluumaadka shakhsiyeed waa ku dhawaad ​​labanlaab marka loo eego fariinta guud.
Qalab weyn oo WordPress ah oo loogu talagalay geotargeting iyo shaqsiyeynta juqraafiga. Plugingooda WordPress waxa ay kuu ogolaanaysaa in aad si fudud u shakhsiyayso website-kaaga jira iyada oo lagu salaynayo goobta booqdaha. GeoFli waxaad ku dooran kartaa goobta aad ku beegsaneyso zipcode, gobolka, waddanka ama xitaa sawiri xayndaabkaaga juqraafi ahaaneed. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad georedirect – falka dib u habaynta booqdayaasha meelo gaar ah URL-yo kala duwan. Si aad u isticmaasho GeoFli waxaad si fudud u doorataa nuxurka aad rabto inaad bedesho, dooro aagga aad rabto inaad beegsato oo beddel nuqulka ama nuxurka si aad u siiso qiimaha daawadayaashan la beegsaday.
Nooca Aaladda Shakhsiyaynta
Muujinta nuxurka khuseeya isticmaalayaasha iyadoo lagu salaynayo aaladda ay u isticmaalayaan si ay u baadhaan shabakada waa hab fiican oo lagu dhimo heerka soo kabashada, kordhinta beddelka iyo siiso booqdayaasha goobtaada macluumaadka ay u baahan yihiin. Fahamka caadooyinka aaladaha macaamiishaada ayaa kaa caawin karta qaabkan shaqsiyaynta. Tusaale ahaan, macaamiishu waxay u badan tahay inay wax ku iibsadaan miiska marka loo eego kuwa casriga ah. Ogaanshaha tan waxa laga yaabaa inay kugu dhiirigeliso inaad ku muujiso macluumaadka iibka alaabta miiska adoo muujinaya qiyamka shirkadda iyo faa'iidooyinka alaabta ee aaladaha mobilada.
Ku ogolanaysaa in aad shakhsiyayso macluumaadka mareegaha iyada oo ku saleysan sida booqde ku helay mareegahaaga iyo waxa uu arkay. Pluginkooda WordPress waa hab awood leh oo lagu bixiyo macluumaadka shakhsi ahaaneed ee booqdayaasha mareegahaaga. Si aad u isticmaasho Logic Hop waxaad si fudud u abuurtaa xaalad, samee bar Logic Hop ah ama xannibo mareegahaaga ka dibna ku meelee shuruudda waxa ku jira.
Muujinta wicitaanada gaarka ah ee ficilada iyo macluumaadka ku salaysan wakhtiga maalinta, usbuuca ama sanadka uu booqdegu joogo goobtaada waxay kuu ogolaan kartaa inaad isticmaasho qaababka isticmaalaha si loo kordhiyo beddelka. Haddii aad ogtahay in badeecad ama adeeg gaar ah ay si fiican u iibiso waqti cayiman, waxaad shakhsiyaynaysaa boggaaga si aad u soo bandhigto inta lagu jiro wakhtigan halkii aad ka geli lahayd oo aad waqti ku qaadan lahayd inaad dib u soo celiso mar kasta oo aad rabto inaad tusto macluumaad cusub.
Shakhsiyeynta Sare ee FlowCraft
Shakhsiyaynta Sare waxay kuu ogolaanaysaa inaad shakhsiyayso macluumaadka degelka iyadoo ku salaysan wakhtiga, tirada booqashooyinka iyo wax ka badan. Plugin kooda WordPress wuxuu kuu sahlayaa inaad isku darto qaybaha oo aad shakhsiyayso xitaa kooxo gaar ah oo dad ah. Si la mid ah If-Si, si aad u isticmaasho shakhsiyaynta Advanced by Flow Craft waxaad si fudud u abuurtaa oo magacow shuruud oo qeex waxa la tusay haddii shuruudda la buuxiyey iyo haddii aan la buuxin.
Shakhsiyaynta Isdhexgalka Goobta
Habka macaamilku ula macaamilo mareegahaaga sidoo kale waa fursad weyn oo lagu tuso iyaga macluumaadka shakhsi ahaaneed. Haddii ay saxiixeen oo ay hore u soo iibsadeen, waxaad soo jeedin kartaa waxyaabo la xidhiidha, haddii ay yihiin markii ugu horeysay ee soo booqda, waxaad u bari kartaa shirkaddaada iyo alaabta ugu caansan isla markiiba, iyo haddii ay heleen goobtaada sababtoo ah xayeysiis gaar ah oo aad adigu leedahay. wuxuu tusi karaa macluumaadka khuseeya xayaysiiskaas.
Ku ogolaadaa in aad shakhsiyayso macluumaadka mareegaha iyadoo lagu salaynayo astaanta booqdahaaga ama la dhexgalka goobta. Pluginkooda WordPress wuxuu kuu ogolaanayaa inaad muujiso waxyaabo gaar ah oo ku salaysan taariikhda, astaanta isticmaalaha iyo wax ka badan. Si aad u isticmaasho If-Si, waxaad si fudud u doorataa shuruudda aad rabto inaad bartilmaameedsato ka dibna deji nuxurka aad rabto inaad muujiso haddii shuruudda la buuxiyo ama aan la buuxin.
Marka macaamiishu ay ku dhacaan mareegahaaga waxa kaliya oo aad haysataa ilbiriqsi kala qaybsanaan ah si aad u soo jiidato dareenkooda oo aad u xiisayso. Shakhsiyeynta waxa ku jira degelkaaga WordPress waa hab fiican oo lagu siin karo booqdayaasha macluumaadka ay raadinayaan, ka dhig inay dareemaan in la fahmay oo ugu dambeyntii kordhinaya beddelka. Laga soo bilaabo shakhsiyaynta macluumaadka xidhiidhka ee ku salaysan goobta booqdaha ilaa shakhsiyaynta sawirka ku salaysan wakhtiga sanadka, la isku xidhi karo, nuxurka qiimaha leh ayaa fure u ah bedelida macaamiisha tayada sare leh.
Maxaa U Wanaagsan Bogagga Alaabta & SEO: Mawduuca ama Dib-u-xireyaasha?
Ka qaybgal Suuqgeynta Raadinta usbuuca soo socda bilaash!